Denmark: Somali Lagu Xukumay Xabsi Cimri ah – Rasaasa News
Feb 3, 2011 denmark, Denmark: Somali Lagu xukumay Cimrigaa ha ku Furto, Somali
Nin Somaliyeed oo jabiyey guriga sawir gacmeed xardhe Kurt Westergaard, si uu u dilo, ninkaas oo xardhay sawir cimaamad xidhan oo ay korka ka saaran tahay bambaano, isaga oo sawirka ku micneeyey in uu yahay Nabi Muxammed [Naxariis iyo NabadGaliyo korkiisa ha ahaatee], ayey maxkamad ku taal dalka Denmark ku xukuntay xadhig cimrigaaga ku dhamayso. Isaga oo lagu eedeeyey isku day dil iyo argagixis [terrorist].
Mohamed Geele oo ay da,diisu tahay sano 29 jir, ayaa damcay in uu dilo sawir xadhaha oo ay da,diisu tahay 75 sano jir, kolkii uu ugu galay guriga sawir xadhaha, isaga oo ku hubaysan Faas weyn iyo Mindi. Sawir xadhaha ayaa isku xidhay qol cabsi awgeed , habeenimadii sanaka cusub ee 2010.
Sawirka uu xadhay Kurt Westgaard sanadkii 2005, ayaa aad uga cadhaysiiyey dhamaan dunid Islamka, waxaana xumaaday xidhiidhkii ganacsi ee u dhaxeeyey dalka Denmark iyo qaar ka mid ah dunida Islamka. Ninka ayaa waxaa uu helay waraaqo loogu sheegay in la dilayo, dawlada ayaa bilowdayin ay sugto amaankiisa iyada oo lacag badan ku bixisay, laakiin kolkii dambe waxaa uu jeclaystay in uu ku noolaado gurigiisa oo ku yaal magaalada labaad ee Denmark, Aarhus.
Kurt, ayaa la joogay gabadh shan jir ah oo uu awoow u yahay kolkii uu Geele guriga u soo dhacay, Kurt wuxuu ku caray oo uu isku xidhay qol naxdin awgeed, waxaana uu markiiba u qashaday Booliska oo oo kolkiiba soo gaadhay. Keele waxaa uu isku dayey in uu Albaabka ku jabiyo Kurt, isaga oo ku dhawaaqayey “waa in aad dhimataa Kurt,” Geele ayaa isku dayey in uu ka baxsado Booliska, laakiin waa la dhaawacay isaguna wuxuu dhaawacay nin Boolis ah.
Geele isaga oo is difaacaya wuxuu sheegay in uu doonayey oo kaliya in uu cabsiiyo Kurt Westergaard, ee uusan doonaynin in uu qudha ka jaro, balse waxaa maxkada laga hor sheegay in uu Geele ku qaylinayey habeenkaas Kurt waa in uu dhintaa.
Maxamed Geele, waxaa uu qaxootinimo ku galay dalka Denmark sanadkii 1995, waxaa la siiyey sharci deganaansho. Waxaana uu ku noolaa magaalada Aalborg, “waxaa uu ka mid ahaa dhalinyarada ka qoran Kalaabka, xiligaas oo uu dhalinyaro badan ku soo jiiday in ay xubin ka noqdaan Kalaabka” sidaas waxaa yidhi Nuuradiin Hussein oo Kalaabkaas ka shaqayn jiray hadana ka shaqeeya xanaanada dadka. Nuuradiin wuxuu sheegay “in Geele uu ahaa nin ka wanaagsan dhalinyarada Kalaabka, wuxuuna ka hadli jiray kubada cagta, wuxuu jeclaa in uu waxbarasho galo si uu mustaqbal wanaagsn u helo.”
Geele, waxaa uu sanadihii dambe xidhiidh la lahaa ururada diimeed ee xag jirka ah ee ka jira dalka Somaliya, waxaana Jamcaha bari ah lagu dhawaaqi doonaa go,aanka ay madkamadu ku riday Geele ee ah cimriggaaga ku dhamayso xabsi.